Himali Sworharu हिमाली स्वरहरु – साहित्य महासंघले विश्वब्यापी प्रतियोगिता बारे विभिन्न निर्णय गर्यो
साहित्य महासंघले विश्वब्यापी प्रतियोगिता बारे विभिन्न निर्णय गर्यो
रसियाबाट डा. मधु माधुर्य, कतारबाट तीर्थसंगम राई, भानु सुनुवार, मलेशियाबाट दीप दर्शन, इजरायलबाट उमा सुवेदी, साउदी अरेबियाबाट खगेन्द्र अधिकारी, थाइल्याण्डबाट खगेन्द्र पन्धाक, युएइबाट समदर्शि काँइला, इराकबाट रामकृष्ण सुनुवार, ब्रुनाईबाट सुरेन्द्र इङनाम, विश्वास दीप तिगेला लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
बैठकले महासंघबाट प्रकाशित पुस्तकहरु महासंघको वेवसाइटमा पनि राख्ने साथै महासंघले प्रयोगमा ल्याएको इमेललाई इमेल प्लस बनाउने निर्णय गर्यो । संचालनमा रहेको विश्वब्यापी प्रतियोगितामा सहभागि बनेर फाइदा लिनुहुन तथा कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुन स्रष्टा शुभेच्छुक सबैमा आग्रह गरेको छ ।
विश्वब्यापी खुल्ला अडियो कविता प्रतियोगितामा तपाई आफू रहेको ठाँउबाटै सहभागि बन्नुहोस । आफ्नै स्वरमा आफ्नो मौलिक कविता रेकर्ड गरि इ-मेल मार्फत हामीलाई पठाउनुहोस । कविता अप्रकाशित र बढिमा २०० शब्दको हुनुपर्नेछ । रेकर्ड गर्ने प्रविधि र ज्ञान छैन भने तपाईको स्काइपी युजर वा सम्पर्क फोन नम्बर सहित हामीलाई इ-मेल अथवा फोन गर्नुहोस हामी सम्पर्क गर्नेछौ ।
प्रतियोगी कविता टाइप वा स्क्यान गरि फोटोसहित पुरा ठेगाना खुलाएर हामीलाई पठाउनु पर्नेछ । प्राप्त हुने सम्पूर्ण नेपाली भाषाका तथा मातृभाषाका कविताहरु संस्थाको वेवसाइटमा उपलब्ध हुनेछन् । विभिन्न मातृभाषा अन्तर्गत एकै भाषाको ७ भन्दा बढि कविताहरु प्राप्त भएमा छुट्टै मूल्याङ्कन गरि पुरस्कृत गरिनेछ । तपाईको प्रतियोगि कविता आजै इमेल गर्नुहोस ।
प्रथम नगद रु २० हजार
दोस्रो नगद रु १० हजार
तेस्रो नगद रु ५ हजार
चौथो देखि दशौलाईः सान्तावना प्रमाण-पत्र
इमेलः gfnl@ymail.com, Skype: nepaliliterature,
फोन नं. 00673 8893020/00673 7147209
कविता प्राप्त हुनुपर्ने अन्तिम दिन २९ जेठ २०६८ आइतबार ।
विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ www.gfnl.org
प्रवासी नेपाली साहित्य समाज (www.pravasi.com.np) वेलायत/ब्रुनाई
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, युएई च्याप्टर
नवोदित साहित्यिक मोवाइल पुस्तकालय, कतार